बसले नाकामै ओरालिदिँदा यात्रुलाई सास्ती- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
बसले नाकामै ओरालिदिँदा यात्रुलाई सास्ती
‘सरकारले सवारीसाधनलाई रोक्ने तर यात्रुलाई प्रवेश दिने कस्तो नीति ल्याएको हो ?’
असार २७, २०७८ लीला श्रेष्ठ
भक्तपुर — कालीमाटीमा ज्यामी काम गर्ने काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–७ भुम्लुटारका रूपक थापामगर सरकारले निषेधाज्ञा गर्ने भनेपछि वैशाख दोस्रो साता गाउँ गए । झन्डै दुई महिनापछि उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो हुन थाल्यो । फेरि काम गर्न भन्दै उनी काठमाडौं फर्किए ।
काठमाडौं उपत्यका भित्रिने पूर्वी नाका साँगासम्म ल्याएर बसलेझारिदिएपछि सामान बोके र गन्तव्यतर्फ लाग्दै यात्रु। तस्बिर : लीला/कान्तिपुर
तर आउने क्रममा सवारीसाधनकै कारण सास्ती खेप्नुपर्‍यो । ‘ठेकेदारले काम गर्न सहज भयो आउनुस् भनेपछि आएको हो, धेरै सास्ती खेप्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘महँगो भाडा तिरेर आउँदा पनि बस चालकले बीच बाटोमै ओरालिदिए ।’ सामान्य अवस्थामा उनी गाडी चढेको फलाँटेबाट काठमाडौंसम्मको भाडा १ सय ९० रुपैयाँ मात्र हो । यसपल्ट १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको हकमा नाकामा छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरेका छन् । रूपक चढेको गाडीले स्वीकृति नलिएको भन्दै सबै यात्रुलाई उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी नाका साँगामै झारिदिएको हो । यसरी अलपत्र पारिएका यात्रुहरू झन्डै ५ सय मिटर हिँडेर फेरि सार्वजनिक यातायात चढ्न बाध्य छन् । ‘जसरी हुन्छ यात्रुलाई उपत्यका प्रवेश गर्नु नै छ, भनसुन गरेर होस् वा विभिन्न बहाना बनाएर किन नहोस्,’ साँगा नाकामा सवारी जाँचमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘स्वीकृति नलिएका सवारीसाधनलाई नाकाबाटै फिर्ता पठाउँछौं, यात्रुलाई पैदल प्रवेशमा भने रोक छैन ।’
नाम मात्रको निषेधाज्ञाले पहुँचबाहिरका यात्रुलाई सास्ती दिएको उनको भनाइ छ । विभिन्न बहाना बनाएर उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्नेहरूका कारण प्रहरीले थप हैरानी खेप्नुपरेको उनले गुनासो पनि गरे । उपत्यका भित्रिने सवारीसाधन र यात्रुलाई नाकामा आइसकेपछि फिर्ता गर्नुको साटो सम्बन्धित जिल्लामै रोक्नुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ । ‘सयौं किलोमिटर पार गरेर आइपुगेका यात्रु जसरी पनि प्रवेश गरेरै छोड्छन्,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश बस्नेतले भने ।
निषेधाज्ञा खुकुलो र सवारी सहजताले केही दिनयता उपत्यका भित्रिनेको संख्या बढ्दो छ । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम र लामो समय निषेधाज्ञा हुन सक्ने भयका कारण उपत्यका छाडेकाहरू अहिले धमाधम फिर्ता आइरहेका हुन् । यसरी भित्रिनेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू, विद्यार्थी, जागिरे र दैनिक मजदुरी गर्ने धेरै छन् । उपत्यका प्रवेश नपाएपछि बनेपा, धुलिखेललगायत काभ्रेबाट काठमाडौंको पुरानो बसपार्क, कलंकी, गोगंबु बसपार्कसम्म चल्ने सार्वजनिक बसले पनि साँगासम्म मात्रै यात्रु ल्याएर ओराल्ने गरेका छन् । ‘सरकारले सवारीसाधनलाई रोक्ने, यात्रुलाई प्रवेश दिने कस्तो नीति ल्याएको हो ?,’ काभ्रे धुलिखेलकी लक्ष्मी तामाङले प्रश्न गरिन्, ‘सर्वसाधरणलाई सास्तीबाहेक केही छैन, नामको मात्र निषेधाज्ञाले कोरोना रोकिन्नँ ।’
प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:२२
कहाँ जितिन्छ, कहाँ हारिन्छ ?
लन्डन — वेम्बलीमा हुने फाइनलमा इंग्ल्यान्डको कुन पक्ष बलियो रहने छ त ? अनि इटालीको प्रशंसा गर्नुपर्ने पक्ष के हो त ? दुवै टिम केही पक्षमा अगाडि छ भने केही पक्षमा पछाडि छ ।
युरो फाइनलका प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षकद्वय इटालीका रोबर्टो मान्चिनी र इंग्ल्यान्डका गारेथ साउथगेट । तस्बिर : एपी
फाइनलमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने तय छ । तर भन्न सक्छौं, खेलमा जित र हारको निर्णय यिनै तथ्यले गर्नेछन् ।
टिमको मध्यपंक्तिबारे कुरा गर्ने हो भने इटाली पक्कै पनि अगाडि छ । इटालीको मध्यपंक्ति स्तरीयमात्र छैन, अनुभवी छ । मार्को भेराट्टी प्रतियोगिताकै विश्वस्तरीय मध्यपंक्तिका खेलाडी हुन् । जोर्गिन्हो त भर्खरको युरोपेली च्याम्पियन्स लिग विजेता टिमका सदस्य हुन् । उनी टिमको रक्षापंक्तिको ठीकअगाडि रहेर खेल्छन् । अब रह्यो, निकोलो बरेला । उनी भर्खर २४ वर्षका भए । उनी इटालीको लिग विजेता इन्टर मिलानका सदस्य हुन् । यिनै तीन खेलाडीमा इटालीको मध्यपंक्ति टिकेको छ ।
इंग्ल्यान्डको मध्यपंक्ति भने कडा मिहिनेती छ । यो पूर्णतः डेक्लन राइस र केल्भिन फिलिप्सको जोडीमा टिकेको छ । भेराट्टी भन्छन्, ‘स्पेनविरुद्ध सेमिफाइनल खेल्नु र इंग्ल्यान्डको सामना गर्नुमा फरक छ । इंग्ल्यान्ड निकै फरक टिम हो । त्यसैले फाइनलमा मध्यपंक्तिको खेल नै निर्णायक साबित हुनसक्छ । सायद हामी यो क्षेत्रमा केही अगाडि छौं र खेलमा फरक पार्न सक्छौं । हामीले खेललाई गति दिन सक्नुपर्छ ।’
बेन्चको बलियो पक्ष
बेन्चमा रहने खेलाडीमा इंग्ल्यान्ड धनी छ, इटालीको तुलनामा । च्याम्पियन्स लिग जितेका चेल्सीका दुई खेलाडी रिस जेम्स र बेन चिलवेल दुवैले समेत खासै खेल्न पाएका छैनन् । प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटका लागि त्यस्ता दुई खेलाडी खेलको अन्त्यतिर उतार्ने विकल्प छ, जसले खेलमा निर्णायक फरक ल्याउन सक्छ । ती हुन्, लिभरपुलका कप्तान जोर्डन हेन्डरसन र फिल फोडेन । उनीहरूलाई इंग्लिस फुटबलमा भविष्यको सबैभन्दा ठूला स्टार मानिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, इंग्ल्यान्ड टिममा मार्कस रसफोर्ड र जाडोन सान्चो जस्ता खेलाडी पनि छन्, जसको उपयोगिता खेलको अन्त्यतिर हुनसक्छ । रसफोर्ड त म्यानचेस्टर युनाइटेडका खेलाडी भए नै, सान्चोलाई पनि भर्खर यही क्लबले बोरुसिया डर्टमन्डबाट किनेको छ, त्यो पनि १० करोड डलरमा । प्रतियोगितामा फ्रान्सपछि इंग्ल्यान्ड नै त्यस्तो टिम हो, जोसँग खेलाडीको पर्याप्त विकल्प छ । इटालीको टिममा भने यो सुविधा पक्कै छैन, बेन्चमा उसका लागि कहलिएका खेलाडी नै छैनन्भन्दा हुन्छ ।
रोबर्टो मान्चिनीसँग इंग्लिस प्रिमियर लिग उपाधि जितेको अनुभवमात्र छैन । उनले त युरोपका ठूला केही क्लब सम्हालेको इतिहास पनि छ । उनी खेलाडी छँदामात्र राम्रा थिएनन्, प्रशिक्षकमा पनि उत्तिकै उम्दा छन् । सायद प्रशिक्षणमा उनी अझ एक हात अगाडि छन् । गारेथ साउथगेट यो पक्षमा पछाडि नै छन्भन्दा हुनछ । उनले तीन वर्षमात्र क्लब सम्हाल्न पाएनन् । त्यसको पनि अन्त्य रेलिगेसनमा भएको थियो । खासै केही उल्लेखनीय पक्ष छैन, साउथगेटलाई लिएर यस पक्षमा भन्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको कुरा गर्ने हो भने साउथगेटलाई मान्चिनीको बराबर मान्न सकिन्छ कि ? उनले यसपल्टको युरो २०२० मा त्यही रणनीति अपनाएका छन्, जुन २०१८ को विश्वकपमा फ्रान्सले अपनाएको थियो । त्यो भनेको पूर्णतः व्यक्तिगत, ठूला र प्रतिशाली खेलाडीमा भर पर्ने । उनले अहिलेसम्म जति जोखिम उठाएका छन्, त्यसले प्रतिफल नै दिएको छ । मान्चिनीलाई लिएर यही तथ्यमा केही प्रश्न गर्न सकिन्छ । भलै, उनी साह्रै भलाद्मी देखिन्छन् ।
युरो २०२० मा कुनै दुई टिमको रक्षापंक्ति बलियो छ भने त्यसका जवाफ हुनेछ, इंग्ल्यान्ड र इटाली दुवैको । इंग्ल्यान्डले अहिलेसम्म एकै गोलमात्र खाएको छ, त्यो पनि फ्रिकिकमा । प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटले त्यसमाथि मिडफिल्डमा त्यस्ता दुई खेलाडी उतार्ने गरेका छन्, जसको सोच आक्रमणभन्दा आक्रमण रोक्नुमा छ । इटालीको रक्षापंक्ति भने पुरानो छ भन्दा हुन्छ । जतिबेलादेखि रोबर्टो मान्चिनीले टिम सम्हालेका छन्, उनले आफ्नो रक्षापंक्तिमा उत्तिकै जोड दिएका छन् ।
सन् २०१८ मा उनले पहिलोपल्ट टिम सम्हालेका थिए । त्यतिबेलादेखि टिमले कि त कुनै गोल खाएको छैन, होइन भने एकै गोल मात्र खाएको छ । दुई बुढा शेर लियोनार्डो बोनुची र जर्जियो चिलिनीले अहिलेसम्म २३ खेलमा क्लिन सिट राखिसकेका छन् । खुबै मिलेको जोडी भएको छ उनीहरूको । सायद रक्षापंक्तिमा दुवै बराबरकै छन् । इटाली राम्रो कि इंग्ल्यान्ड राम्रो ? भन्न गाह्रो छ । डर छ, कतै खेल गोलरहित बराबरीमा रहने छैन, ९० वा १ सय २० मिनेटमा पनि ?
प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:२१